४ बैशाख, काठमाडौं । म्यानमारको जुन्ता सरकारले बन्दीगृहमा रहेका २३ हजारभन्दा बढी बन्दीहरुलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको छ । देशभरका विभिन्न बन्दीगृहमा रहेका मध्ये कुल २३ हजारभन्दा बढीलाई नयाँ बर्षको अवसर पारेर रिहा गर्ने तयारी भएको हो ।
आन्दोलनमा लागेको आरोपमा झण्डै एक हजार बालबालिकाहरुलाई सुरक्षाकर्मीहरुले अझै पनि नियन्त्रणमा लिएको पनि राष्ट्रसंघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । हिंसा रोक्न र शान्तिको बाटो रोज्न राष्ट्रसंघलगायतका धेरै निकाय र मुलुकहरुले पटक पटक आग्रह गरेपनि म्यान्मारमा हिंसात्मक घटनाहरु भइरहेको छ ।
पछिल्लो संसदीय निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्ट सेनाले फेरि निर्वाचन गराउने बाहनामा म्यान्मारको सत्ता हातमा लिएको छ । तत्कालिन नयाँ संसदको पहिलो बैठक बस्ने तय भएकै दिन फेब्रुअरी १ तारिखमा सेनाले शिर्ष नेताहरुलाई थुनामा राखेर सत्ता नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको हो । -एएफपी
गण्डकी प्रदेशमा थप २५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन
माधव पक्षका १७ प्रदेश सांसदसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग
सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा विवेक झा नियुक्त
विद्युत् विस्तार गर्न आग्रह
कोरोना संक्रमणबाट बारामा थप एकजनाको मृत्यु
यसरी बच्न सकिन्छ कालो ढुसीबाट ?
शरीरमा देखिएका यी १० लक्षण ठूला रोगको संकेत, ढिला हुनुअघि पहिचान गर्नुहोस् ?
पोख्रेली पानीको ब्राण्ड पिउरो अब काठमाडौंको बजारमा